KISMAAYO, Jubaland - Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta booqday Ciidamada Darawiishata Jubbaland ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab gaar ahaan aaga Degmada jamaame.
Madaxweynaha ayaa halkaas u tagay si uu u dhiiri galiyo Ciidamada geesiyaasha ah ee kaabiga ku haya Degmada Jamaame iyo deegaanada kale ee gobolka Jubbada Hoose ay Argagixisadu kaga harsan yihiin.
Waxaa Madaxweynahu uu halkaas kula kulmay Sarakiisha hogaaminaysa howlgaladan iyo masuuliyiin kale isagoo ku booriyay inay sii laba jibaaran howlgalka socda si kooxda Argagixisada ah ee Al-Shabaab looga dulqaado dhibaatada ay dadka shacabka ah ku hayaan isagoo sidoo kale Sarakiisha ka dhagaystay sida ay howlgaladu u socdaan iyo guulaha ilaa hada ay Ciidamadu gaareen.
Waxaa uu sheegay Madaxweynahu in Degmooyinka Gobolka Jubbada Hoose ee gacanta cadowga ku jira ay socdaan howlgaladii lagu xorayn lahaa sidoo kalana Ciidamada Darawishta Jubbaland ay dhaqdhaqaaqyo wax ku ool ah ka wadaan qaybo kamid ah Gobolka Jubbada dhexe iyadoo howlagaladii u danbeeyay ee Ciidamada aagaas ku wajahan ay ka fuliyeen agagaarka Degmada Xagar dharbaaxo culus lagu gaarsiiyay Argagixisada Al-Shabaab.
Ciidamada kala duwan ee howlgalkan iska kaashanaya oo kala ah Ciidamada darawiishta Jubbaland Ciidamada Xooga Dalka iyo Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab Jubbaland ayuu Madaxweynahu sheegay in ay cashar u dhigeen Argagixisada maalmaha soo socdan ay gaari doonan guulo cusub iyagoo is raacin doona haraaga Kooxda dhiiga umada banaysatay ee Al-Shabaab.
DF Soomaaliya oo "ku fashilantay" in ay kala furfurto ciidamada Afmadow
Soomaliya 16.03.2020. 14:32
Madaxweynaha Jubaland ayaa muujiyey in uu ka xun-yahay in ciidamadii loogu talagalay baacsiga Al-Shabaab ay is-horfadhiyaan.
Soomaliya 07.03.2020. 13:42
DF oo ku “khasbanaatay” inay la shaqeyso maamulka Axmed Madoobe
Soomaliya 21.12.2019. 15:00
ONLF oo fahfaahin cusub kasoo saartay kulanka Axmed Madoobe
Afrika 28.11.2019. 16:40
Jubaland oo shaacisay go'aan ku aadan xubnaha kasoo baxa Shabaab
Soomaliya 11.11.2019. 13:53
XFS oo ka jawaabtay hadalkii Kenya ee caleema saarka Axmed Madoobe
Soomaliya 04.11.2019. 20:36